Imikhiqizo eminingi yezinwele zanamuhla ukuthi kunzima kakhulu ukukhetha okulungile. Ukukhetha i-shampoo yokunakekelwa kwezinwele okufanelekile kuwumsebenzi obhekene nobunzima. Okokuqala kudingeka siqaphele izinkomba zethu, bese sifunda ukubunjwa kwezindlela zesimanje, bese uthenga kuphela.
Okufanele kakhulu kuyisimo sokuhlanza izinwele izikhathi ezingu-1-2 ngesonto. Uma ugeza ikhanda lakho kaningi, ungenza umonakalo ngokulahla isikhumba samafutha emvelo. Izoba eyomile futhi ingenayo impilo, ukukhwabanisa nokucasula kwe-scalp kuzovela. Izinwele ezinamafutha kufanele zigezwe zonke izinsuku ezingu-3-4, zome kakhulu - zonke izinsuku ezingu-5-7. Le mithetho iphinde isetshenziswe ehlobo, lapho izinwele zoma kakhulu ngaphansi kwethonya lomoya nelanga. Ukugeza njalo kuvimbela izinwele zokuvikelwa kwemvelo. Ngakho-ke, uma ubona okubhalwe kwi-shampoo "yokusetshenziswa kwansuku zonke" - kungcono ukungathathi ithuluzi elinjalo.
2. Ukukhetha ngohlobo lwezinwele
Izinwele ezinamafutha zihlukaniswa nobuhlakani balo, ukungcola okusheshayo nokugcoba. Uma ngabe kunjalo, uzama ukuthatha amajaji ngezinwele ezinamafutha. Kodwa uphutha! Phela, eqinisweni, uhlobo lwezinwele luyonqunywa uhlobo lwesipuphu. Ngisho nangomsebenzi okwandisiwe wezingqungquthela ezisabekayo, izinwele zingoma ngenxa yokugeza njalo kanye nomthelela wezinqubo ezehlukene. Futhi, ngokuphambene, uma unezinwele ezinamafutha, ungase ube nesibindi esomile. Ukukhetha okungalungile kwe-shampoo kugcizelela kuphela inkinga. Kungcono ukuxhumana nodokotela wezinambuzane. Ngokuzikhethela ekukhethweni ongenza kalula iphutha.
3. Ukukhethwa kwekhwalithi
I-shampoo embi iyabonakala ngokushesha - izinwele ngemva kokuba zibe mncane, zingabanjwe kahle futhi zidaka ngokushesha. Ngemuva kokugeza nge-shampoo yangempela yekhwalithi, izinwele zikhanya, kalula futhi zenziwe ngokuphelele kwi-hairdress kunoma yiluphi uhlobo lwezinwele. Ukuze wenze umkhiqizo wakho ukhange, izinkampani eziningi zengeze izithako ezihlukahlukene ezimnandi nezemibala kumswakama. Kodwa abazuzi izinwele. Khumbula: uma lezi zithasiselo zingaphezulu, umbala wesikhumba wemvelo ngokwengeziwe, iphunga elimnandi kakhulu, kungcono izinwele zakho. Ukucophelela kakhulu ekukhethweni kwabo kufanele kube ngabantu abahlukunyezwa yi-seborrhea nemithi.
4. Izithasiselo ezengeziwe
Izingxenye ezihlukahlukene ze-shampoos zithinta zombili izimonyo zokwelapha. Isibonelo, i-keratin ibuyiselwa isakhiwo sezinwele, iqinisa izindonga zezinwele, iyinika ubuhle. I-Lipids yengeza ukuthobeka, ukuqina nokukhanya. Okumangalisa kakhulu amavithamini, ikakhulukazi i-vitamin A noma i-retinol. Ivuselela izinqubo eziphathelene nokuguga kwamaseli. Ngezinwele ezimpunga, amavithamini akwenzi lutho. Ama-amino acids awanelisa kahle izinwele.
5. Shampoo for izinwele izinkinga
Ngezinwele ezinamafutha udinga i-shampoo equkethe i-tannin noma i-quinine, ejwayelekile ukusebenza kwezinhlayiya ezisabekayo. Yenziwa ukuze kuhlinzekwe ukuqhuma okukhulu futhi kungcono ukugeza amafutha kusuka ezinyaweni. Izinhlayiya zezinwele ezinamafutha kufanele futhi ziqukathe izinto ezinamafutha. Izinwele ezidayiwe noma ezibomvu zithinteka kakhulu yi-lecithin. Izinwele ezigulayo futhi eziphelile izidakamizwa zidinga i-shampoo nge-silicone. Ukuze uthole ama-seborrhea ne-seborrhea, uchungechunge lwe-shampoos ne-zinc noma i-tar luzosiza. Lezi zinhlanzi zenzelwe ngqo ukwelashwa futhi zithengiswa kuma-pharmacy.
6. Shintsha i-shampoo
Kungakhathaliseki ukuthi awuthandi i-shampoo yakho, kufanele uyiguqule njalo. Ochwepheshe bayeluleka ukwenza lokhu njalo ezinyangeni ezingu-2-3. Izinwele zigcwele izakhi futhi kancane kancane ziyeke ukusabela kubo, ngakho-ke kunesidingo. Ngemuva kwesikhashana ungabuyela ku-shampoo yakho oyintandokazi.
7. Ungakhohlwa mayelana nesimo sezulu
Ukukhethwa kwe-shampoo ngokuqinisekile kubaluleke kakhulu. Kodwa mayelana ne-air conditioner akumele ukhohlwe. Abafaki bokudla akugcini kuphela ukondla, ukuphucula kanye nokuqinisa izinwele, kodwa futhi bancishise ukushisa kwabo, bakwazi ukulwa nokufaka ivolumu ezinwele. Zivikela izinwele kusuka elangeni, emoyeni, ezinomshini obomvu oshisayo nokungena kwezinhlayiya eziyingozi eziqukethwe emoyeni.
8. Masks ezondayo
Izinwele ezicindezelekile nezonakalisiwe zihlale zikhona, kungakhathaliseki ukuthi ziyikhwalithi ye-shampoo, izidingo zamasks ezondla. Zinezinto zokwelapha ezingangena ngaphakathi ezinyaweni bese zibuyisela isakhiwo sabo. Amaski avame ukubhoboza izinwele futhi ashiye okwesikhashana, bese agezwa. Imiphumela emihle yokunakekela izinwele ezinjalo ifinyelelwa emva kwezinsuku ezingu-10.
9. Ama-shampoos amabili noma amathathu kwelinye
Ngokuvamile kukhona ama-shampoos, afaka phakathi i-balm noma ezinye izakhi. Ngokuvamile, ukwandisa izingxenye kunciphisa ukusebenza komunye ngamunye. Le nhlanganisela ifanele ukuhamba noma ukungabi nesikhathi. Kodwa uma usendlini, futhi ungasheshi, kungcono ukusebenzisa noma iyiphi yalezi zimali ngokwahlukana. Kuyinto efiselekayo ukuthi babevela ochungechungeni olufanayo.
10. Ama-Shampoos awaxazulula izinkinga zempilo
Akukho ngisho nama-shampoos noma ama-conditioner angcono kakhulu, akukho nqubo yokunakekela izinwele ezifanele ngeke ukwazi ukusiza uma isimo esibi sezinwele sihlotshaniswa nanoma yisiphi isimo esingavamile emzimbeni. Ukucindezeleka kwengqondo, ukuphazanyiswa kwesisu kanye namathumbu, izifo ezihlukahlukene ze-hormonal kanye nezinguquko ezinamanzi noma ukungavamile kwe-metabolism kubangele ukwanda kwezinwele noma kungaholela ekulahlekelweni kwabo. Ngaphansi kwezimo ezinjalo, isazi kuphela esingakusiza ukuthi uqonde kahle ukuthi yini okufanele ukhokhele kakhulu.
I-mask mask yokuphela kwezinwele ekhaya
Ukuvikelwa nokudla: izici zokuhlola izinwele ekhaya
Indlela yokwenza umnsalo wezinwele
Masks izinwele ekhaya
Izindwangu zezinwele ezisekhaya ekhaya
Yini okufanele ibe imilenze ekahle?
Ukugubha uKhisimusi emndenini
Ukuqeqeshwa kolimi lwesiNgisi
Izakhiwo zokuphulukisa ze-dog rose
Indlela yokuvuselela nokuhlanza umzimba wakho ekhaya